Dhatabhesi Haigone Kuvhurwa nekuti iyo VBA Chirongwa Chiri Mairi Haigone Kuverengwa
musha Products DataNumen Access Repair Iyo Dhatabhesi Haigone Kuvhurwa Nekuti Iyo VBA Chirongwa Irimo Mayo Haigone Kuverengwa
Ruzivo rwakadzama nezve "Iyo Dhatabhesi Haigone Kuvhurwa Nekuti Iyo Vba Chirongwa Chiri Mairi Haigone Kuverengwa" Kanganiso
Paunenge uchishandisa Microsoft Access kuvhura yakashatiswa Yekuwana dhatabhesi faira, iwe unoona inotevera yekukanganisa meseji (kukanganisa 53) kutanga:
Faira haina kuwanikwa
Ziva zita remeseji yekukanganisa "Microsoft Visual Basic yeKushandisa", saka zvinoita sekunge iko kukanganisa kunokonzerwa nekuti faira yeVBA haiwanikwe.
Dzvanya bhatani "OK", iwe unowana inotevera meseji yekukanganisa (kukanganisa 29081):
Dhatabhesi haigone kuvhurwa nekuti chirongwa cheVBA chirimo hachigone kuverengwa. Dhatabhesi inogona kuvhurwa chete kana chirongwa cheVBA chikatanga chadzimwa. Kubvisa chirongwa cheVBA kunobvisa kodhi dzese kubva kuma module, mafomu uye mishumo. Iwe unofanirwa kutsigira dhatabhesi yako usati waedza kuvhura dhatabhesi uye kudzima chirongwa cheVBA.
Kuti ugadzire kopi yekuchengetedza, tinya Cancel wozoita kopi yekuchengetedza dhatabhesi yako. Kuti uvhure dhatabhesi uye bvisa chirongwa cheVBA pasina kugadzira kopi yekuchengetedza, tinya OK.
Iyo Visual Basic yeApplication chirongwa mudhatabhesi yakaora.
Kana iwe ukaenderera nekudzvanya bhatani "OK" kubvumira Access kuvhura iyo database uye kudzima iyo VBA chirongwa, iwe unowana chechitatu kukanganisa meseji (kukanganisa 29072), sezasi pazasi:
Microsoft Access yaona huori mune ino faira. Kuedza kugadzirisa huwori, tanga waita backup kopi yefaira. Dzvanya iyo Faira tebhu, nongedzera kuna Manage wobva wadzvanya Compact uye Kugadzirisa Dhatabhesi. Kana iwe parizvino urikuyedza kugadzirisa huori uhu, unofanirwa kuitazve iyi faira kana kuidzosera kubva kune backup yapfuura.
zvinoreva kuti Microsoft Access haigone kuvhura dhatabhesi.
Iyo yekutanga yehutano Yekuwana dhatabhesi haina chero mapurojekiti eVBA zvachose. Nekudaro, nekuda kwehuwori, Access ichafunga iyo yakashata dhatabhesi faira ine VBA mapurojekiti uye edza kuivhura. Mushure mekutadza kuvhura iyo faira, icharatidza iwo ari pamusoro mhosho mameseji, izvo zviri kutovhiringidza sezvo iyo yekutanga faira isina chero VBA maprojekiti zvachose.
Mhinduro chete ndeyokushandisa chigadzirwa chedu DataNumen Access Repair kugadzirisa iyo MDB faira uye kugadzirisa iyi kukanganisa.
Semuenzaniso yakashata MDB faira inokonzeresa iko kukanganisa. mydb_7.mdb